Fakafaka : hifarana ny resa-boky… | NewsMada
… Hanao ahoana ny dingana vita ? Tratra ve ny tanjona ? Eo am-piandrasana ny valin’ireo fanontaniana ireo, tsy takon’afenina ny ezaky ny efa mpanao sy ny jery vilan’ireo mpitazam-potsiny. Tsy midika ho fifanomezan-tsiny akory, fa fanehoana ny zava-misy ihany ! Nandritra ny fanamarihana ny Andro eran-tany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpanoratra, tamin’ity taona 2016 ity ihany koa no nahatsapana fa tsy mbola nahitana vahaolana mazava ireo olana efa nisy tany ambadiky ny 10 taona lasa.
Marisarisa ny fifandraisan’ny mpanoratra sy ny editora. Tsy metimety ny fifamatoran’ny rohim-boky, hany ka sady manoratra ny mpanoratra no mpivaro-boky. Tsy tafa-paka any amin’ny mpamaky ny boky soratana, fa raha lasa lavitra indrindra, eny ambony talatalan’ny fivarotam-boky an-tanàn-dehibe, sns. Ampahan’olana ihany ireo.
Anisan’ny voateniteny nandritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny boky, tamin’ity taona ity, ny tsy fanampian’ny fanjakana ny rohim-boky indrindra fa eo amin’ny fanapariahana. Ilaina io, saingy somary hadino ny fampifamatorana ny tontolon’ny boky amin’ny tontolon’ny fampianarana. Tao anatin’ny 40 taona, tsy nozarina hamaky boky intsony ny zaza malagasy, fa nopotehina tamin’ny « toloram-potsiny ». Nozaraina « polycopie ». Taty aoriana, noraisin’ny mpampianatra ho fampidiram-bola ho azy manokana ny fanaovana « photocopie » ny taranja ampianariny… Hadino tanteraka ny boky !
Tsy ny sehatry ny fampianarana ihany no mila jerena tahaka izany fa ny sehatra rehetra mihitsy. Goavana indrindra amin’ireny ny isan-tokantrano. Raha tia vaky boky ny ray aman-dreny, ka mahay mampita izany amin-janany, ho tia koa izy ireo. Sa ve aleo hojereny any amin’ny « internet » ny zavatra tsy hainy ?… Dia mahatantesa àry ny vokany, satria tsy ny lesona ihany no ho hitany ao fa ny « tsy lesona » ihany koa !